Andrianainarivelo Hajo – Fanarahan-dalàna : « Tokony hihaona amin’ny Praiminisitra izahay mpanohitra » | NewsMada
Andrianainarivelo Hajo – Fanarahan-dalàna : « Tokony hihaona amin’ny Praiminisitra izahay mpanohitra »
Tsy tokony ho ela intsony. « Miandry ny valin-tenin’ny HCC ato anatin’ny fotoana fohy izahay amin’ny taratasy nalefanay any momba ny maha mpanohitra anay. Tokony hovaliany mialohan’ny zoma fahatelon’ny volana janoary ny maha mpanohitra anay ka hihaonana amin’ny praiminisitra, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana », hoy ny filoha mpanorina ny Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo, omaly teny Ambohimanambola. Nohamafisiny fa fanajana ny lalàna izany sady ahazoan’ny vahoaka mahita hevitra roa eto amin’ny firenena sy hiainana ny demokrasia. Natsidiny sahady koa fa hanolotra volavolan-dalàna eny Tsimbazaza ny depiote VPM/MMM hanitsiana ny fomba fiasan’ny HCC sy tsy hiverimberenan’ny tsy fanarahan-dalàna eto. Anisan’ny maha sarotiny ity antoko naorin’Andrianainarivelo Hajo ity ny fametrahana ny tany tan-dalàna ka nampahatsiahivany fa voahitsakitsaky ny mpitondra izany. Noraisiny ho ohatra voalazan’ny lalàna fa tokony hofidina ny filohan’ny faritra. « Mbola tendrena ihany anefa izany izao. Io lalàna ahazoana manendry io koa anefa efa nofoanana. Tsy ara-dalàna izany satria notendrena tamin’ny lalàna inona ireo lehiben’ny faritra ireo ? », hoy ihany izy.
Miseholany ny fitsaram-bahoaka
Nanteriny fa antony ilàna ny mpanohitra izany ary tsy mahagaga raha miseholany ny fitsaram-bahoaka satria tsy matoky ny fanjakana intsony ny vahoaka ka tonga hatrany amin’ny korontana.
Anisan’ny lalàna mbola nohitsahin’ny mpitondra koa ny nankatoavan’ny filoham-pirenena sy nanaovany sonia ary namoahana ilay lalàna momba ny fifandraisana sy ny serasera ary navoaka amin’ny gazetim-panjakana nefa misy andininy mbola notakin’ny HCC fa tokony hojerena ao. Anisan’izany ny tokony hampifanarahana io lalàn’ny serasera io amin’ny sata afrikanina momba ny zon’olombelona. « Ambonin’ny lalàna izany ny filoham-pirenena manoloana ireo rehetra ireo… Tsy mampandroso firenena izany ka ilaina ny mpanohitra ho arofanina sy mpanara-maso ny ataon’ny mpitondra », hoy Andrianainarivelo Hajo.
Fampitomboana ny volan’ny kaominina
Nohitsiny koa fa tsy nandany ny tetibola 2017 ny depiote VPM/MMM satria tsy ampy ny vola ho an’ny fitsinjaram-pahefana. « Tsy afaka handroso raha tsy misy izany ka atsy nekenay. Takinay ny hampitomboana ny vola fanampiana ny kaominina. 9 tapitrisa Ar nampiakarina ho 12 tapitrisa Ar izany tamin’ny andronay… Tokony ho vita izany satria tsy misy Frankofonia amin’ity taona ity. Ny vola nanaovana io fivoriana io atokany ho an’ny eny ifotony », hoy ity ben’ny Tanàna teo aloha ity.
Tsiahivina niarahaba an’Andrianainarivelo mivady noho ny taona vaovao ny birao politikan’ny antoko, io omaly io. Niatrika izany ireo depiote sy ben’ny tanàna ary sampan’ny antoko ahitana ny TMMM sy ny VMMM.